This entry was posted on 1:08 PM and is filed under Short Story , Translation . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
On 5:28 PM , megumi said...
On 8:47 PM , ဝေလေး said...
On 9:36 PM , မေ့သမီး said...
ဘယ်နေရာမှာဖတ်ဖူးခဲ့မှန်း မမှတ်မိတော့ဘူး။ ပြန်ဖတ်သွားပါတယ်။
On 10:24 PM , kaungkinpyar said...
ဘာသာပြန်ထားတာရော၊ ဥပမာပေးတာရော အကုန်ကောင်းပါတယ် မောင်လေးရေ
On 2:22 AM , မိုးသွေးငယ် said...
ဗဟုသုတ တစ်ခု ရစေပါတယ်ဗျာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေ့နေပေမယ့် နောက်တခါ မှတ်မိအောင် ဘာသာပြန် မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
On 7:14 PM , thinzar said...
On 7:48 PM , စိတ်စမ်းရေ said...
On 6:50 PM , ko said...
On 10:24 PM , လင်းဒီပ said...
On 12:11 AM , Dream said...
တိပါတယ်.. အူးအူးပန်းဂျဂါးမှာ မိန်းမရေးယောက် ချိဒါကို ရာကျွားနေဒယ်...
အူးအူးမိန်းမလေးရောက်ယုံးကိုဒေါ့တိဖူး...မသင်းမေ ဆိုတဲ့တယောက်ပဲ တိဒယ်... ဟိဟိ..အူးအူးချစ်ဆုံးကြီးမို့ လို့ မှတ်ထားတာ... :P
On 3:34 PM , မိုးခါး said...
မှတ်သွားပါတယ် ..း)
On 4:41 PM , Unknown said...
On 11:16 AM , မမသီရိ said...
အတော်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေး ပါပဲ
လူတွေ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင် ရေး နိုင်တယ်
ပြန်ပြီး မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူး